I-Pitch Perfect 4: Izinto Odinga Ukuzazi! - Ukuzijabulisa
Iphuma nini i-Pitch Perfect 4?
Abalingisi be-Pitch Perfect 4: Ubani ozobuyela ku-Pitch Perfect 4?
Yini esingayilindela ku-Pitch Perfect 4?
Naphezu kokusikisela okuphindaphindiwe kwabalingisi, asikho isimemezelo esisemthethweni esenziwe mayelana nefilimu yesine ye-Barden Bellas. Yonke imali evela kukhava yeqembu i-Pitch Perfect ye-Love On Top ka-Beyoncé izonikelwa ku-UNICEF, kodwa akubangakho zindaba mayelana nokuthi isitolimende sesine sochungechunge sizokhishwa noma cha.
Akumangazi ukuthi amaBellas njengoba siwazi ngeke esaba khona ngenxa yezibuyekezo ezingezinhle ze-Pitch Perfect 3 kanye nokwehla kwemali etholwa ngamabhokisi ayizigidi eziyi-100 uma kuqhathaniswa nabandulelayo.
Inqobo nje uma i-Universal ingasho okunye, i-Pitch Perfect 4 isengenzeka. Uma noma ubani onamandla okwenza kwenzeke, abadlali, futhi nakhu konke okudingeka ukwazi mayelana nesithombe sesine esicatshangelwayo.
Ngenxa yokuthi isithombe sesine asinalo usuku olumisiwe lokukhululwa njengamanje, kunzima ukubikezela ukuthi singase silindele ukuthi sikhishwe nini. Ngemva kokuthumela isithombe sakhe kanye nozakwabo be-Pitch Perfect u-Brittany Snow, u-Anna Camp, kanye noChrissie Fit bonke befaka iminwe emine kuma-akhawunti akhe ezinkundla zokuxhumana ngo-Okthoba 2018, uRebel Wilson uthole ukunakwa okukhulu kubalandeli be-Pitch Perfect.
Kusukela lesi sithombe sathathwa ngoNovemba 2018, naphezu kwesibonakaliso sikaWilson sokuthi uzokwenza esinye isithombe somculo ezinyangeni eziyi-12 ezizayo, akukho okushintshile ngempela emhlabeni womculo. Ngenxa yalokho, okwamanje akunakwenzeka ukucacisa ukuthi isithombe sesine sizokhishwa nini ngenxa yalokho. Ngaphambi kokwenza lokho, kuzodingeka ukuthi uqinisekise ulwazi.
Nokho-ke nakuba kusabalele ukuthi ifilimu yesine izokwethula iqembu elisha likaBellas, kuya ngokuba nzima ukucabanga ukuthi ngeke ibe nabaculi ababa nesandla ekwenzeni leli filimu libe yimpumelelo kwasekuqaleni.
Ngaphezu kuka-Anna Kendrick njengo-Beca, u-Rebel Wilson njengo-Fat Amy, u-Brittany Snow njengo-Chloe, u-Anna Camp njengo-Aubrey, u-Hailee Steinfeld njengo-Emily (owajoyina i-Bellas ku-sequel yokuqala), u-Hana Mae Lee njengo-Lilly (owaziwa nangokuthi u-Esther, esiyitholile efilimini yesithathu), no-Ester Dean njengoCynthia, ukusho amagama ambalwa.
Maningi amathuba okuthi kwenziwe ifilimu yesine ngenxa yokuthi amalungu aleli qembu afuna ukuphinde ahlangane komunye umzuliswano we-cappella mayhem. Lapho nje isitolimende sesithathu se-Pitch Perfect siphuma, uWilson wabonisa intshisekelo yokwenza amafilimu amane noma amahlanu ngaphezulu, kanti u-Kendrick wathi abalingisi bazoqhubeka nokusebenza ndawonye kuze kube phakade. UWilson noKendrick bobabili bazwakalise intshisekelo yokwenza amafilimu amane noma amahlanu ngaphezulu.
Lo mlingisi, osekhangisa ngohlelo lwakhe olusha lwethelevishini olungokoqobo, iPerfect Harmony, utshele i-ET Online ukuthi uzobe ehlele ifilimu yesine i-Pitch Perfect uma yenziwa. Amazwi akhe alandelwa ukuthi, ngiyawathanda lawo mantombazane, wanezela, futhi ngiyathanda ukudlala indima yami, ngakho-ke uma bengidinga, ngiyoba khona ngaphandle kokucabanga kancane.
Ukubuya kuka-Elizabeth Banks no-John Michael Higgins, abadlale abahlaziyi be-caustic u-Gail no-John kumafilimu amathathu okuqala, kuthenjwa ukuthi kuzoba yingxenye yanoma iyiphi ifilimu yesine.
I-Pitch Perfect 3 ibishoda ngabalingiswa abambalwa ababalulekile, okuhlanganisa u-Skylar Astin no-Ben Platt, okuphakamisa umbuzo wokuthi ifilimu yesine izobabuyisa yini abafana noma cha. UTrish Sie, ongumqondisi, uthe ukuhoxiswa kwakungenxa yokungqubuzana okuhlela, kodwa akazange akuvimbe ukuthi aphinde avele esikhathini esizayo.
I-Rise Season 2: Imininingwane Odinga Ukuyazi Njengamanje!
I-Young Sheldon Isizini 6: Imininingwane Odinga Ukuyazi Njengamanje!
Efilimini yesithathu, abakwaBellas baphinde bahlangana ohambweni lwaphesheya lwe-USO (United Service Organisations), eminyakeni emithathu ngemuva kwefilimu yesibili. Umncintiswano wawuhlelelwe indawo ka-DJ Khaled yokuvula, futhi ophumelele wanikezwa ithuba lokumvulela.
U-Beca unikezwa ithuba lokuvulela u-DJ Khaled, ngesibusiso sika-Bellas, ngemuva kokubhulasha ngeshwa namaqili athile, ngaphambi kokuba iqembu lemigulukudu lihlangane ukuze lidlale okokugcina. Abaculi nabalingisi, amaBellas yiqembu labesifazane abasebasha.
Yize bekuyifilimu yokugcina futhi wonke umuntu wayekwazi lokho, umlingisi ngamunye wafinyelela isiphetho esijabulisayo, njengokuthi u-Beca athole umsebenzi no-DJ Khaled, u-Aubrey aphinde ahlangane nobaba wakhe futhi amukelwe esikoleni sokuhlolwa kwezilwane, u-Emily ubuyela e-Barden University, futhi U-Lilly uthola uthando no-DJ Dragon Nutz.
Ngakho-ke, uma i-Pitch Perfect 4 izoba yimpumelelo, izodinga ukuthola indlela yokuhlanganisa amaBellas ngaphezu komunye umncintiswano.
Omunye umqondo wamafilimu esikhathi esizayo uvela ku-Anna Camp. Lapho ebuzwa ukuthi angathanda yini ukubamba amaBellas njalo ngemva kweminyaka emihlanu noma eyishumi, lo mlingisi watshela uCollider, Sifuna ukuqhubeka sikwenza kuze kube yilapho sesibadala futhi sidlala emakhaya asebekhulile.
Ingabe uFat Amy wake waba umama? Ingabe ukhona umndeni uFat Amy noBumper abanawo? Kungaba mnandi kakhulu ukubuyela emuva ubone ukuthi kwenzekani kubalingiswa osubazi nobathandayo, usho kanje.
Isimo Sokuvinjezelwa: Ukuhlaselwa Kwethempeli Ongeke Wakukhohlwa